Saturday December 09, 2017 - 09:31:20 in Wararka by Super Admin
Idaacadda Islaamiga Andalus ee ku hadasha afka Xarakada Al-Shabaab ayaa maanta barnaamijka maalinlaha ah ee Caalamul-Yowm ku soo gudbisay barnaamij si gaar ah diiradda u saaraya jawaabcelinada ay Musimiintu ka bixiyeen go'aankii Trump uu ku icla
Barnaamijka wuxuu diiradda saarayaa dibadbaxyada loogu magacdaray jimcadii carada ee shalay gilgilay magaalooyin badan oo ku yaalla caalamka Islaamka iyo warcelinada ay Muslimiinta caalamka ka bixiyeen go'aanka Trump.
Barnaamijka wuxuu sidoo kale gudbinayaan warcelinada Jamacaadka Jihaadiga ah ee ka halgamaya caalamka Islaamka ay ka bixiyeen go'aanka Mareykanka uu Qudus ku siiyey Yahuudda.
Waxaa sidoo kale barnaamijka lagu soo gudbinayaa saddex dowladood oo carbeed oo Trump iyo Yahuudda la galay heshiis loogu magacdaray "heshiiskii Qarniga" kaas oo ah heshiis Yahuudda loogu xalaaleynayo dhulka Filistiin, hordhacna u ahaa go'aanka Trump.
Masjidka Xaramka oo khudbadii shalay aan lagu soo hadal qaadin qadiyadda Al-Aqsa ka dib markii maamulka Aala-Sacuud uu dadka ka hor istaagay in ay Muslimiinta la wadaagaan kacdoonka lagu diidan yahay go'aanka Trump.
halkaan ka dhageyso Barnaamijka oo arimahaas lagu faaqiday.
Dadkii Ku Dhintay Dhulgariirkii Indonesia oo Gaaray 1234 Qof.